August 2012 - ♥ ♥ MY GREEN LIFE ♥ ♥
Phyu Lwin August 28, 2012 13 Comments
ရင်ထဲ အဲဒီကမ်းပါးက ဘယ်တော့မှ မတိုက်စားသွားဘူး
စိတ်ထဲ စိမ်းလန်းမှုက အမြဲစိုစွတ်
ဘယ်တော့မှ အရောင်ပြောင်းမသွားဘူး .......။
အတိတ်ရဲ့လမ်းတလျှောက် တမာရနံ့ တဖွဲဖွဲရွာ ..........
တစ်ယောက်ရဲ့ရင်ဘက်က တစ်ယောက်အတွက် ဖြစ်ခဲ့တယ် .......
ငါတို့ စိုက်ပျိုးသမျှ အဖြစ်ထွန်းဆုံးယာခင်းဟာ ရေဆင်းပဲ
အမြဲစီးဆင်းဆဲပါ မြို့ကလေးရေ .........
အဲဒီမြို့ကလေးရဲ့ ကောင်းကင်ပေါ့ ..... အမြဲလိုလို အပြာရောင်တွေ လွှမ်းနေတတ်တယ် ... တခါတခါတော့ မိုးတိမ်တွေနဲ့ ... မည်းမှောင်နေတတ်တဲ့ ကာလတွေလည်း ရှိခဲ့တယ် .....။ သူ့အရိပ်အောက်မှာ .... ခဏတာ လာနားခိုကြတယ် ...။ အချိန်တန်တော့လည်း .... အဝေးကိုပြန်ထွက်ခွာသွားကြတယ် ...။ မြို့ကလေးကတော့ ဘာမှပြောင်းလဲမသွားသေးဘူး ....။ ၀င်လာသူ ထွက်သွားသူတွေနဲ့ စည်ကားနေဆဲပါပဲ ...။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တချို့က သီချင်းသံတွေလည်း ပျံလွင့်ဆဲ .... စားပွဲထိုးလေးတွေရဲ့ အသံစာစာလေးတွေလည်း ကြားနေရဆဲ... အဆောင်ရှေ့က ဆိုင်ရာဆိုင်ရာတို့ရဲ့ဂစ်တာသံတစ်ချို့လည်း မျောလွင့်နေဆဲ .... စာမေးပွဲကာလ .. သစ်ရွက်ခြောက်တွေကြားထဲ ... တဖြောက်ဖြောက်နင်းခြောက်ရင်း .... တမာရနံ့လေးတွေလည်း သင်းပျံ့ဆဲ ...။
ဆုံဆည်းသွားကြတဲ့ ချစ်သူတွေရှိကြသလို .... အသည်းကွဲသွားတဲ့ အသည်းခွဲသွားတဲ့သူတွေလည်း .. ကိုယ်စီကိုယ်စီရှိနေဆဲ .....။ သံယောဇဉ်တွေကို မြေသြဇာအဖြစ်အသုံးချ ..အချိန်တွေကို ထွန်ယက်လို့ အချစ်ကို စိုက်ပျိုးပြုစုခဲ့ကြပြီး မေတ္တာတရားတွေ နားလည်ဖေးမမှုတွေသီးပွင့်လာအောင် ပျိုးထောင်နိုင်ခဲ့သူတွေရှိသလို မထင်မှတ်ထားပဲ အမုန်းတွေ သီးပွင့်လာတဲ့ သူတစ်ချို့လဲ ရှိနေဆဲ ....။ မြို့လေးမှာ ခဏတာ လာရောက်နားခိုခဲ့ကြတဲ့သူတွေထဲမှာ ..... မြို့လေးအကြောင်း ..... ကဗျာတွေစာတွေ ဖွဲ့တတ်တဲ့ သူတစ်ချို့လည်းရှိနေဆဲပါပဲ .....။ မေ့သွားတဲ့သူတွေရှိသလို .... လွမ်းဆွတ်နေတတ်သူတွေလည်း ရှိနေဆဲ ...။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ အဓိပတိလမ်းမက အဲဒီကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ သားသမီးတွေအတွက် စာဖွဲ့စရာကောင်းခဲ့သလိုပဲ .... အဲဒီမြို့ကလေးရဲ့ ဒီလမ်းကလေးကလည်း .... ခဏလာနားခိုသူတွေအတွက် မေ့မရတဲ့ စာဖွဲ့စရာနေရာတစ်ခုအဖြစ် .......။ လွမ်းစိမ့်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားထဲမှာ မင်းသားပြောသွားခဲ့ဖူးတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းကို အခုထိ ပြန်ကြားယောင်မိနေတယ် ..။ ဆရာ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်၊ မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) စတဲ့စာရေးဆရာတွေက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ရင်းနဲ့ တက္ကသိုလ်နောက်ခံ ဇာတ်လမ်းတွေ အမှတ်တရ အများကြီးဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြတယ်တဲ့..။
ဒါပေမယ့် အခုချိန်ထိ .... ကဗျာတစ်ချို့ကလွဲရင် .... အဲဒီမြို့လေးက အသီးအပွင့်တွေက ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ မတွေ့ဖြစ်သေးဘူး ....။
အိပ်မက်တစ်ချို့တော့ ရှိပေမယ့် ... ဘာမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ ကျမလည်း .... တစ်ကယ်တော့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး....။ ဒီဘလော့ဂ်မှာ ဒီလို မတောက်တခေါက်စာတွေရေးနေတယ်ဆိုတာတောင် .. သူငယ်ချင်းတွေရှေ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မချပြရဲသေးဘူး.........။ အကြောင်းပြချက်သိပ်မရှိ ...... ကျမ transparency မရှိသေးဘူး .... ယုံကြည်ချက်မရှိသေးဘူး.......။
အနည်းဆုံးတော့ အဲဒီမြို့ကလေးမှာ .... သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆိုးတူကောင်းဖက် .. ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတယ် ..။ အခုထိလည်း ပြန်တွေ့လိုက်တိုင်း မျက်ရည်လည်လောက်အောင် .... သူငယ်ချင်းတွေ ချစ်ခင်နေဆဲပဲ ရှိနေသေးတယ် .....။ ပြောင်းလဲသွားတာတစ်ချို့ရှိသလို ... မပြောင်းလဲတဲ့ ခင်မင်မှုတွေလည်း ရှိနေသေးတယ် ........။
သူငယ်ချင်းရေးထားတဲ့ အမှတ်တရကဗျာလေးပါ ...။ အောက်က စာတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကတော့ ကျမရေးထားတာတွေပေါ့ ....။
# My Own Feelings # သူငယ်ချင်းကဗျာ
Labels: My Own Feelings, သူငယ်ချင်းကဗျာ
I'm still Beautiful ♫ ♪ ♥
Phyu Lwin August 25, 2012 13 Comments
မချစ်လို့ ချန်ထားရစ်နိုင်မှတော့ ၀မ်းနည်းနေစရာမလိုပါဘူးလေ
လမ်းအခွဲမှာ …. ငါ့မျက်ရည်တစ်စက်မကျခဲ့တာ
နင်နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းနေလိမ့်မယ် ….
သွားချင်တဲ့သူကို …. ထွက်သွားလို့ ကြိုပြောခဲ့မိတယ် …
ငါ့ဘက်က ကြိုပြီး နှင်ရက်ခဲ့နိုင်လို့ ..
နောက်ထပ်ပြီး မချည်နှောင်ခဲ့တော့လို့ …နည်းနည်းတော့ခံပြင်းခဲ့လိမ့်မယ် ..
နင်သွားချင်တဲ့လမ်းကို ကြိုခင်းပေးလိုက်တာပါ …….
အခုတော့ တစ်ချိန်က ပုံပြင်တစ်ပုဒ်လည်းပြီးဆုံး
ဒါပေမယ့် …တစ်ခုတော့ သိထားပေးပါချစ်သူ
ငါတစ်ခါပဲ ငိုမယ် …တစ်ခါပဲ ကြေကွဲဖြစ်ခဲ့မယ်
အရာရာအားလုံးက ပြီးဆုံးသွားမှာပါ ……။
ကံမကုန်လို့ တစ်နေ့နေ့မှာ ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့
ငါ့ကို သိခဲ့ဖူးတယ်လို့ မပြောပါနဲ့
ဒါပေမယ့်လည်း .. ငါ့ပျော်ရွှင်မှုကို ငါကိုယ်တိုင် ပြန်ရှာဖွေနိုင်ခဲ့တယ်
"ငါ့ဆီကိ်ု ပြန်လာခဲ့ပါ" .. "အရင်လိုပြန်ထွေးပွေ့ပါ"
"အရင်အချိန်တွေကို ပြန်ယူလာပေးပါ" ဆိုတဲ့
ငါ့ဆီကနေ ဘယ်တော့မှ ကြားရမှာမဟုတ်ဘူး ........
ခါးသီးတဲ့ အတိတ်ကို ပြန်တမ်းတရလောက်အောင်
လမင်းဆီက ကြယ်ကြွေကောက်ဖို့ စောင့်မျှော်နေရလောက်အောင်
ငါအရူးမှ မဟုတ်တာပဲ ….။
အရင်လို အချိန်တွေကို ပြန်တမ်းတလိုက်တာဆိုတဲ့
ငါ့ဆီမှာတော့ နင်ဘယ်လိုမှ ရှာဖွေတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး..........။
မျက်ရည်တွေနဲ့ ….. အတိတ်ကိုဆုပ်ကိုင်နေဆဲပဲလို့ထင်ရင်
မှားသွားမယ် …. ချစ်သူ..........။
အခုချိန်ထိ ငါဟာ လှပနေဆဲ …
မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း တောက်ပနေဆဲ ……
အိပ်မက်တွေလည်း ရှင်သန်နေဆဲ ……..
ခြေလှမ်းတွေလည်း တက်ကြွနေဆဲ …….
လှပတဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုဆီ ဦးတည်ရင်း ….
ပစ္စုပ္ပန်တစ်ခုမှာ …….. ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပြန်ထွေးပိုက်လို့ …..။
ကိုရီးယားက နာမည်ကြီးအဆိုတော် HwangBo ဆိုထားတဲ့ "I am still Beautiful" ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ဘာသာပြန်ပြီး ခံစားရေးဖွဲ့ထားတာပါ .......။ ဒီသီချင်းက အရမ်းနာမည်ကြီးတယ် ... လူကြိ်ုက်လဲ အရမ်းများတော့ တော်တော်များများတော့ သိထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ...........။ ကျမရေးထားတာက သူဆိုထားတဲ့အကြောင်းအရာအတိုင်း ထပ်တူနီးပါးကျအောင်တော့ ဘာသာပြန်ကြည့်ထားပါတယ် ။ တစ်ချို့နေရာတွေတော့ ဖတ်ကောင်းအောင် နည်းနည်းဖွဲ့နွဲ့ထားခဲ့တယ် ......။ အင်းးးး ကျမဘာသာပြန်လိုက်လို့ သီချင်းအရသာ ပျက်သွားမလားတော့ မသိ ... :D။
သီချင်းလေးလည်း နားထောင်ရင်း... သူသရုပ်ဆောင်ထားတာကိုကြည့်ရင်း ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ခံစားလို့ရမယ်ထင်ပါတယ် .......။
Thanks to All for your kind Visit ♥♥♥
သစ်ပင်နဲ့ မတူတဲ့အချစ် ~~~
Phyu Lwin August 20, 2012 18 Comments
ကြီးထွားလာရင်း … ကောင်းမွန်လှပစွာရှင်သန်ဖို့
တယုတယ ပြုစုပျိုးထောင်လို့ရတယ် ….။
နောက်ဆုံးတော့ … ဂရုစိုက်မှုတွေကြားထဲက
ယုယမှုအချို့နဲ့ … ရေလောင်းပေါင်းသင်ရင်းပဲ
မြင်လာရင်း ….. ပျိုးသူအတွက် ကြည်နူးမှုတွေဝေစေလို့ပေါ့ ….။
တစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတတ်တဲ့ အရာမဟုတ်တာသေချာတယ် …။
သံယောဇဉ်တစ်ခုကြောင့် အချစ်လို့ သတ်မှတ်
ဘယ်လောက်ကြာကြာ … အချိန်တွေဘယ်လိုပဲ တိုက်စားသွားပါစေ
သံယောဇဉ်တစ်ခုက ဘယ်လိုမှအချစ်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး …။
ဖြစ်နိုင်ချေက သုညအောက်နည်းလွန်းတယ် ….။
အချစ်ဆိုတာ မွေးမြူလို့မရဘူး .. ကြီးထွားလာအောင် ပျိုးထောင်လို့မရဘူး …
ဖန်တီးလို့မရဘူး …ဖျက်ဆီးလို့လဲမရဘူး ….
ချစ်လား/မချစ်လားဆိုတာ အချိန်တွေအကြာကြီးစဉ်းစားပြီး အဖြေထုတ်ဖို့မလိုဘူး …
ရုပ်လှလို့… စိတ်လှလို့ …. အရည်အချင်းရှိလို့
အထင်ကြီးစရာကောင်းလို့ … ရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့သူမို့လို့
ဘ၀အတွက် လုံခြုံစေနိုင်လို့ … စသဖြင့် ..စသဖြင့်
အကြောင်းပြချက်တစ်ခုတစ်လေကြောင့် … ချဉ်းကပ်တယ်ဆိုကတည်းက
အချစ်စစ်မှာ အကြောင်းပြချက်မရှိဘူး … ချစ်လို့ချစ်တယ်.....။
သူချစ်တာနဲ့ ကိုယ်ချစ်တာ ထပ်တူမကျတဲ့အခါ
လူနှစ်ယောက်ဟာ ဖူးစာမပါဘူးဆိုတဲ့ စကားတစ်လုံးနဲ့
အဝေးဆုံးကို ဝေးချင်ဝေးခဲ့ကြတာမျိုးရှိမယ် …..
အချစ်လို့ အထင်မှားခဲ့လို့ ….
လူတစ်ယောက်က လူတစ်ယောက်အတွက် အမုန်းဆုံးဖြစ်သွားတာရှိရင်ရှိမယ် …။
အချစ်မရှိပဲ ..ဘ၀တစ်ခုကို တစ်သက်လုံးဖြတ်သန်းသွားတဲ့သူတွေ
ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ လက်ချိုးမရေနိုင်ပါဘူး …
ဒါပေမယ့် … သူတို့အတွက်
သစ်ပင်မရှိပဲ …. ဘယ်သူမှမရှင်သန်နိုင်ပါဘူး ….
တစ်သက်လုံးပျော်ချင်ရင်တော့ သစ်ပင်စိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲ ….။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ အမြင်တစ်ခုသက်သက်ပါ.. မှားချင်လည်းမှားနိုင်သလို မှန်တာလည်း ပါနိုင်ပါတယ် ... ။
စာမျက်နှာတစ်ခုရဲ့ ဖြစ်တည်မှုအစ ~~~
Phyu Lwin August 18, 2012 12 Comments
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ … ဒီနေ့တော့ အကြွေးရှင်းစရာလေးတစ်ခုကို အပြတ်ရှင်းမှဖြစ်တော့မယ် ..။ တစ်လောက မောင်လေးနွေလရဲ့ ဘလော့ဂ်လေး ရုတ်တရက်ပျောက်သွားတုန်း … ဒီတဂ်ပို့စ်လေးဖြစ်လာတာပဲဆိုပါတော့ ..။ သူလာပြောကတည်းက ချက်ချင်းရေးပေးချင်ပေမယ့် ….အက်ဆေးရှည်ရှည်တွေရေးဖို့ မအားတာရယ် .. အရင်ကတည်းက ကျမရဲ့ Blog စတင်ခဲ့ပုံ..ဘာကြောင့် ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ပုံစသဖြင့်ကို အချိန်ပေးပြီး သေသေချာချာလေးရေးဖို့ စိတ်ကူးရှိတာရယ်ကြောင့် အခုမှရေးဖြစ်ခြင်းပါ..။
ကျမ ဂျာမနီကိုမရောက်ခင် မြန်မာနိုင်ငံမှာတုန်းက မြန်မာဘလော့ဂ်တွေ တစ်ခါမှ မဖတ်ခဲ့ဖူးပါဘူး..။ အဲတုန်းက ဆိုင်မှာ သွားသုံးရတာလည်းပါသလို ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် .. အင်တာနက်သုံးပြီဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Information ကို Google မှာရှာတယ်..။ ကူးလာပြီး အိမ်ပြန်ရောက်မှ စာဖတ်ဖြစ်တယ် .။ အဲဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ ကျောင်းတက်ဖို့ ဒီကိုရောက်လာတယ် ..။ ရောက်ရောက်ချင်းလဲ မြန်မာဘလော့ဂ်တွေကို မဆက်စပ်မိဘူး …။သိပ်မသိတာကြောင့်လဲပါပါတယ် ..။ တစ်နေ့တော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလထဲမှာ အတန်းထဲကကျောင်းသား အားလုံးအတွက် International Students Party တစ်ခုလုပ်မယ်..အဲဒီမှာ အပြန်အလှန်ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်သလိုမျိုးဖြစ်အောင် ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးစီလုပ်ခဲ့ကြမယ်.. ဖြစ်နိုင်ရင် ရိုးရာဝတ်စုံဝတ်စေချင်တယ်ဆိုပြီး organizer က အားလုံး ကိုပြောလာတယ်..။ မြန်မာဝတ်စုံဝတ်ဖို့ ဆံပင်ကို မထုံးတတ်ဘူး ..ကျစ်ဆံမြီးလှလှလေးကျစ်သွားချင်တာကလည်း တစ်ခါမှမလုပ် ဖူးတော့ မလုပ်တတ်..သူများတွေလို ကူပေးမယ့်သူလဲ ဘေးနားမှာမရှိ ..တစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ အင်တာနက်ထဲမှာ ရှာလိုက်တာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် “သနပ်ခါးမေ” ဆိုတဲ့ဘလော့ဂ်လေးမှာ ပုံနဲ့ သေချာရှင်းပြထားတာကို တွေ့လိုက်တယ် ..။
အဲဒီကနေ အစပြုပြီး မြန်မာဘလော့ဂါတွေရေးတဲ့ blog တွေကို စဖတ်ဖြစ်တာပဲ ..။ သတင်းဘလော့ဂ်တွေကလွဲရင် ရသစာတွေ ကိုယ်ပိုင်ခံစားမှုလေးတွေရေးတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို လည်ဖြစ်တာများတယ်..။ သတင်းတွေက Facebook မှာမြန်မာသတင်းဌာနတိုင်းလိုလိုကို subscribe လုပ်ထားတော့ အဲမှာက သတင်းဖတ်ဖြစ်တယ်။ နောက်တော့ ကိုယ်တိုင်စာရေးချင်လာတယ်..။ ကျောင်းတုန်းကလဲ မတောက်တခေါက် ဟိုမရောက်ဒီမရောက်လျှောက်ရေးတတ်တယ်လေ..။ နောက်ပိုင်းမှာ စာတွေနဲ့ မအားတာနဲ့ပဲ စာရေးချင်စိတ်ကို ခဏမေ့ထားခဲ့ရပြီး ကျောင်းပိတ်ရက်ရောက်တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့မှာဒီ Blog ကို စတင်ပြီး ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်…။ ကိုယ်တိုင်ပဲ အစကနေအဆုံး ဖန်တီးခဲ့ပါတယ် …။
အဲဒီအချိန်တုန်းက ဆောင်းရာသီကုန်အပြီး နှင်းတွေကျပြီးခါစ ..နှင်းတောထဲမှာ နေ့တိုင်းဖြတ်ပြီးကျောင်းကို သွားတက်ခဲ့ရတဲ့ ခက်ခဲတဲ့နေ့တွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီးခါစ ..ဒါပေမယ့် နှင်းဖြူဖြူတွေမြင်ရင် ချစ်တယ် ပျော်တယ်.. အဲဒါနဲ့ ဒီဘလော့ဂ်နာမည်ကို Sweety Snow ဆိုပြီးပေးခဲ့တယ်..။ တကယ့်သဘာဝနှင်းတွေရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတာကိုရည်ညွှန်းချင်ခဲ့တာပါ …။ ကလောင်နာမည်တွေဘာတွေလဲ သိပ်မစဉ်းစားချင်ဘူး..ပြီးတော့ အမည်ရင်းလဲ မသုံးချင်တာနဲ့ ဒီနာမည်ကိုပဲ သုံးခဲ့တယ် ..။ အခုတော့ ဒီနေ့ပဲ ကျမချစ်တဲ့နာမည်တစ်ခု ပြောင်းလိုက်တယ်..။ ကျမက သဘာဝအစိမ်းရောင်ကို ချစ်တယ်.. အထူးသဖြင့်…. သစ်ပင်တွေရဲ့ အစိမ်းရောင်ကို အရမ်းချစ်တယ်.. ရိုးရိုးကာလာအစိမ်းကိုချစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး… သစ်ပင်စိမ်းတွေနဲ့ အစိမ်းရောင် ကမ္ဘာကြီးအဖြစ်ပဲ မြင်ချင်တယ် .. အဲလိုဖြစ်အောင်လည်း တတ်နိုင်သလောက်တော့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ကြိုးစားနေတဲ့သူဆိုတော့ Blog title ကို MY GREEN LIFE ဆိုပြီး ပြောင်းလိုက်ပါပြီ…။
ရည်ရွယ်ချက်က စာရေးချင်တာ.. စာရေးလေ့ကျင့်ချင်တာမျိုးပါ..။ ဒီအတိုင်းဆို ဘယ်လိုမှမရေးဖြစ်ဘူးလေ..။ ပြီးတော့ Facebook မှာ ကိုယ့်အကောင့်ထဲမှာ စာရေးတာမျိုးမလုပ်ချင်ဘူး ..။ သီးသန့် site တစ်ခုမှာပဲ စာသီးသန့်ပဲရေးချင်တယ်..။ စစချင်းတုန်းကတော့ ကျောင်းပိတ်ရက်လည်းဖြစ်တာကြောင့် အက်ဆေးပုံစံတွေရေးဖြစ်တယ် …။ တောင်ရောက်မြောက်ရောက် ပဲ..စစချင်းဆိုတော့.။ နောက်ပိုင်းမှာ ကျောင်းပြန်ဖွင့်လာတော့ သိပ်အချိန်မပေးရတော့တဲ့ ကဗျာတွေပိုအရေးများလာခဲ့တယ်..။ အလုပ်ရှုပ်နေရင် ကဗျာရေးရတာ ပိုမြန်သလိုပဲ..။ စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုလိုပဲဖြစ်ဖြစ် .. အပျော်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမအတွက် ကဗျာရေးရတာ အချိန်သိပ်မပေးရဘူး..။ အဲလိုနဲ့ပဲ ကဗျာလောက်ပဲရေးနေခဲ့တာ တော်တော်ကြာသွားတော့ ကဗျာဘလော့ဂ်လို့တောင် မှတ်ရမလို ဖြစ်နေပြီ.။ အခုတော့ မနေ့ကပဲ စာမေးပွဲပြီးသွားလို့ ကျောင်းတစ်လလောက်ပိတ်တော့ အက်ဆေးပုံစံမျိုးတွေ ရေးဖြစ်လာဦးမှာပါ ..။
(၃) သင့်ရဲ့ဘလော့လေးအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ထိ ရည်မှန်းထားသလဲ…ဘယ်လောက်ထိ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသလဲ ?
ဒီအတွက်တော့ ရည်မှန်းထားတာဆိုတာက ကျမစာရေးရရင်တော်ပြီ..။ ဘာမှရည်မှန်းမထားပါဘူး..။ စာဖတ်သူတွေအများကြီးလာဖတ်အောင် ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေရေးမယ် ဘာညာလည်း စိတ်မကူးထားဘူး..။ ရေးချင်တာကို ရေးချင်တဲ့အချိန်မှာ ချရေးမယ် ..ဖတ်ရတာကောင်းတဲ့အခါရှိသလို မကောင်းတဲ့အခါမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်.။ ကျမရေးတဲ့စာတွေကို blogger အချင်းချင်းအပြန်အလှန်အားပေးတာရှိတယ်.. စာဖတ်သူတစ်ချို့ရှိရင်ရှိမယ် … ရသတစ်မျိုးမျိုးပေါ့ .. အဲလိုမျိုးတော့ ခံစားရမယ်ထင်တယ်.. ။ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတာကတော့ အထူးပြောစရာတောင်မလိုတော့ပါဘူး..။ ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ စာမျက်နှာလေး တစ်ခုကို ကလေးလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်သလိုချစ်တယ်..။ သူ့အတွက် အကောင်းဆုံးတွေပဲ ဖန်တီးပေးချင်တယ် ..သူကနေ အခြားသူတွေအတွက် အပန်းဖြေစရာစာလာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်.. တစ်ချို့အတွက် ကျမဖန်တီးလိုက်တာ တစ်ချို့ က ခံစားချက်ချင်းတူလို့ သဘောကျနှစ်သက်သွားကြရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်စုံတစ်ခုတော့ ရသွားတယ်ဆိုရင် တစ်ကယ်ကျေနပ်နေမှာပါ..။
မပျောက်ခဲ့ဖူးပါဘူး..။ အခုအချိန်ထိတော့ သူကကျမရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀မှာ အချိန်ပြည့်နီးပါး ပါဝင်နေပါတယ်..။ စာရေးသည်ဖြစ်စေ မရေးသည်ဖြစ်စေ ခဏခဏဖွင့်ကြည့်တယ်..။ ပျောက်များပျောက်သွားခဲ့ရင်တော့ အတော်ဝမ်းနည်းမိမှာပဲ..။ ကိုယ့်လက်နဲ့ ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ အရာတစ်ခုကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားသလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာကိုး..။
ရေးတော့ရေးလိုက်တာပဲ.. တော်တော်များသွားခဲ့ပြီ ..။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...။ ပျော်ရွှင်ပါစေ :))
အစက ဓါတ်ပုံတင်ထားသေးတယ်.. အခုပြန်ဖြုတ်လိုက်တာပါ ...။ ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူး.. ဘလော့ဂ်မှာ ကိုယ့်ပုံကို တင်ရမှာရှက်တတ်လို့ပါ :D
# Tag Posts
Phyu Lwin August 16, 2012 16 Comments
တမာရနံ့လေးက သင်းလို့ပေါ့ ………
လေတဖြူးဖြူးကြားမှာ …စကားသံတွေ မသဲမကွဲ
နင့်သီချင်းသံတွေ မကြားရဘူးဟာ ………။
နေပူပူ မိုးရွာရွာ ..ထီးမဆောင်းကြေး….
ငါတို့က သဘာဝကိုပဲ ချစ်သူတွေမို့…
ထမင်းတစ်နပ်စားပြီး ..တစ်နေကုန်လမ်းလျှောက် …..
ခရေတွေလို ခြောက်တဲ့အချိန်ဆိုအနံ့မှမရှိတာ ….
နီရဲရဲစိန်ပန်းတွေကတော့ … ငါ့အတွက်ကဗျာမဆန်ပြန်ဘူး ….
ငါက ပန်းပန်ရတာကို ကြိုက်ရလောက်အောင် မိန်းကလေးဆန်တာလည်းမဟုတ်…။
ငါ့အတွက် ကူပြောပေးပါဟာ …
ငါတို့သူငယ်ချင်းတွေ … ခုချိန်ထိ လက်တွဲခဲ့ကြတာ
နင်မပါတော့ပေမယ့် ….. ငါတို့ရင်ခုန်သံတွေ ထပ်တူကျတုန်း…….။
နင်မပါတော့ပေမယ့် …ငါတို့လမ်းတွေဆက်လျှောက်နေတုန်း ….
နင်မပါတော့ပေမယ့် …… သစ်ပင်တွေရှင်သန်နေတုန်း …သစ်ရွက်တွေလည်း ကြွေနေတုန်း……
နင်မပါတော့ပေမယ့် ….. ခရေတွေလည်းမွှေးနေတုန်း ..တမာတွေလည်း သင်းနေတုန်း ……
နင်မပါတော့ပေမယ့် …. ရေပြင်ကျယ်ကြီးလည်း လှိုင်းထနေတုန်း …တောင်တန်းတွေလည်းပြာနေတုန်း …
နင်မပါတော့ပေမယ့် … တောင်တက်လမ်းလေးလည်း ရှိနေတုန်း .. ရေတမာပင်တွေဝေနေတုန်း …
နင်မပါတော့ပေမယ့် .... ငါချစ်တဲ့သစ်ပင်ကို ငါ့လက်နဲ့ ..ငါကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကျ ..ပျိုးထောင်နေတုန်း..။
ဘ၀တစ်ပါးမှာ ..... နင်ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းနေမှာပါ ............။
ကဗျာမဟုတ်တော့ ဖတ်ရတာ တစ်မျိုးတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်.... ဒါပေမယ့် အဆင်ပြေမှာပါ ..။ ရုတ်တရက် စိတ်ကူးပေါ်တာကို ချရေးမိလိုက်တာမို့လို့ပါ ..။ အားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေ .....။
Phyu Lwin August 14, 2012 12 Comments
မိုးတိမ်ပဲ ပြန်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ ငါ့ဘ၀လေ...
ခါးသီးလို့ရပ်တန့် လိုက်ချင်လဲ
ငါ့ကို ခဏတာစိုစွတ် ဖျားနာစေခဲ့သူရေ...
မင်း ဖြောင့်ဖြူး ညင်သာဖို့ 
အသီးအနှံအပွင့် တို့ အတွက်
တောင်ပံခတ်ဖို့အားမရှိလဲ
ရပ်တန့် ခိုင်းတဲ့ သင်္ကေတကို နားလည်တဲ့ငါ့အတွက်
ဘယ်နတ်ဘုရားဆီ ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခွင့် တောင်းရမလဲ..........။
မင်းစိတ်တိုင်းကျ ရေးဖို့ ပေးတဲ့
ငါ့ ဘယ်ဘက်ရင်ခွင် စာရွက်လွတ်မှာ
" မုန်းတယ် " ကိုမှ အတင်းရေးတယ်...
မပိုင်ဆိုင်ရမှန်း ကြိုသိခဲ့ရင် တင်ထားတဲ့လေးနဲ့ 
အပေါ်ပိုင်း အောက်ပိုင်း ခွဲကြည့်မိတဲ့ နင်နဲ့ ငါ
ဘယ်ကမ္ဘာမှာမှ ဆုံမလဲ မသိဘူးနော်....
ငါ့ကိုသေမိန့် ချတော့မယ့်....အလွမ်းဆိုတဲ့ကောင်ရယ်...... ...............................။
သူငယ်ချင်းရေးထားတဲ့ကဗျာလေးပါ ....။ ကျမက ဘာမှမရေးဖြစ်သေးလို့ ...သူ့ကဗျာလေးလည်း ခံစားရတာကောင်းတာနဲ့ ဝေမျှလိုက်တာပါ....။ ဘလော့ဂ်မှာစာရေးတာကို သူငယ်ချင်းတွေကို မပြောပဲ တိတ်တိတ်လေးရေးနေတာ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ သူ့ကို ပထမဆုံးပြောပြဖြစ်တော့ ကျမစာရေးတာကိုမအံ့သြပေမယ့် ... ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပဲ နေနိုင်တာကို သူကအံ့သြနေတယ်..။ ရေးထားတဲ့ကဗျာတွေနဲ့ ကျမလို ပျော်ပျော်ပဲနေတတ်တဲ့သူနဲ့ ဘယ်လိုမှတောင် မအပ်စပ်ဘူးတဲ့.. ။ မပြောပြရင် ဘယ်လိုမှသိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့..။ ဟုတ်ပါတယ်... ကိုယ်တိုင်ပြောပြတာမဟုတ်ရင် ဒီဘလော့ဂ်နဲ့ ကျမနဲ့က ဘယ်လိုမှ ဆက်စပ်လို့မရဘူး ....။ ဒီလိုပါပဲလေ .. အားတဲ့အချိန်တော့ အကျွေးရေးစရာ တဂ်ပို့စ်တစ်ခုလည်း ရှိသေးတယ်... သေသေချာချာရေးချင်တာနဲ့ အခုအဲဒါကို မရေးဖြစ်သေးတာပါ..။
အားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေ.... ကဗျာလေးကို နှစ်သက်ခံစားနိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..။ ကျမကတော့ ကြိုက်တယ် ..။ ဓါတ်ပုံက ကျမကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့လမ်းလေးပါ..။ လိုက်ဖက်မလားလို့ ထည့်လိုက်တာပါ.။
# Love Poems # သူငယ်ချင်းကဗျာ
Labels: Love Poems, သူငယ်ချင်းကဗျာ
Phyu Lwin August 12, 20127Comments
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရေးတဲ့ ကဗျာလေးပါ..။ ကြိုက်လို့ ဒီမှာ ပြန်သိမ်းထားတဲ့သဘောပါပဲ.. :D
သူလဲ ခေါင်းစဉ်မရှိတဲ့ ကဗျာတွေ ခဏခဏရေးတယ် ...။ ဒါလည်း ခေါင်းစဉ်မရှိပြန်ဘူး ...။
ကဗျာလေးကို ခံစားနှစ်သက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .....။ ကျမကတော့ ကဗျာတွေချစ်တတ်သူဆိုတော့ ... ကြိုက်ပါတယ် ......။
Phyu Lwin August 10, 2012 13 Comments
အော်ရေးရှားပင်အောက်က ခုံတန်းလေးတစ်ခုလဲပါတယ် ….။
အရောင်ရင့်ရင့် အပွင့်နုတ်နုတ်ထီးလှလှလေးတွေပါတယ် ….။
အပြောကျယ်တဲ့ …ရေကန်ကြီးတစ်ခုပါတယ် ….။
ကဗျာမဆန်တဲ့ တောင်တက်လမ်းတစ်ချို့ပါတယ် ….။
ငါ့ရှေ့မှာ နင့်အကြောင်း စကားတစ်လုံးတောင် မဟတော့တဲ့
ငါ့ကြောင့် နင်ကျခဲ့တဲ့ မျက်ရည်တစ်ချို့
အလွမ်းတွေကို စာမဖွဲ့ချင်တော့ဘူးလို့ စိတ်ကူးမိပေမယ့်
စိတ်ကူးတည့်တိုင်း ရေးမိတတ်တဲ့ အသည်းကွဲကဗျာတစ်ချို့........
ငါနင့်ကို မုန်းနေတယ် …………………………..။
မမေ့သေးတာကိုက ရှုံးနေပြီ … ဟုတ်တယ်..ငါရှုံးခဲ့တာဖြစ်မှာပါ …။
ဘ၀တစ်ခြားက နင် ..သိဖို့လည်းမလိုပါဘူးလေ …..။
Phyu Lwin August 05, 2012 13 Comments
စွပ်စွဲကြလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့ပါတယ် ...........
ဇာတ်သိမ်းကို ကြိုသိနေတာက နင်နဲ့ငါပဲဖြစ်နေခဲ့တာကိုး ......
အဲဒီအရှုံးတွေကို ကဗျာတွေအဖြစ် ထုဆစ်
မေ့ပစ်ဖို့ ကြိုးစားနေမိတာ ..ငါမမှားသေးဘူးထင်တာပဲ .....
ငါ့မှာကြိုးစားဖို့ လွတ်လပ်ခွင့်တစ်ချို့ရှိနေသေးတယ် .......
ရှုံးတယ်လို့ အများကထင်တဲ့နင် သိလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး
လျှပ်တပြက်အတွင်းမှာ ခွပ်ကနဲ ကွဲအက်သွားခဲ့တာကိုး .........။
တကယ်တော့ အချစ်မှာ အနိုင်အရှုံးမှမရှိတာ
နှလုံးသားရဲ့ရေရွတ်သံကို မသိကျိုးကျွန်ပြုပြီး လှည့်အထွက်
တိုးလျလျလေး ....ကိုယ်ကြားလိုက်တယ်ဆိုရုံလေး ......
တကယ်တော့ ကိုယ့်ရင်ဘတ်ထဲက ကွဲအက်သွားတဲ့
သူသိအောင်လည်း ကိုယ်ဖွင့်မပြောမိခဲ့ ~~~~~~~~။
Phyu Lwin August 02, 2012 18 Comments
ကဗျာလှလှလေးတစ်ပုဒ်ရေးမယ်ဆိုပြီး... ဒီစာရွက်လေးကို ဆွဲထုတ်လိုက်တာ..... မထင်မှတ်ဘဲ.. အသည်းကွဲစာတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားတယ် O_o
အခုတလော...အသည်းကွဲတဲ့အကြောင်းတွေ ခဏခဏကြားနေလို့ နားရည်ဝသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်...။
ကိုယ့်ဘာသာရေးပြီး ကိုယ့်ဘာသာပြန်ဖတ်တာတောင် ရေးထားတာက တစ်စက်ကလေးမှ ကဗျာမဆန် ;'(
ရေးပြီးသားဆိုတော့ မထူးပါဘူးဆိုပြီး ဘလော့ဂ်မှာတင်လိုက်ရတာ..... အသစ်မတင်ဖြစ်တာလည်း ကြာမှာစိုးလို့ ..... သည်းခံပြီး ဖတ်သွားပေးပါဦးနော် .... အားလုံးကို ခင်မင်လေးစားလျက်ပါ ......။